तपाईको आज आइतवारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ त विशेष शुभ ? « Sansar News
तपाईको आज आइतवारको राशिफल, हेर्नुहोस् आज क–कसलाई छ त विशेष शुभ ?
७ कार्तिक २०७८, आईतवार ०८:१४
अवसरले पछ्याए पनि चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ। प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले दुःख दिनेछन्। व्याहारिक समस्याले योजना रोकिन सक्छ। कामको चाप बढ्नेछ भने स्वास्थ्यले त्यति साथ नदिन सक्छ। मिहिनेतको नतिजा चित्तबुझ्दो नआउन सक्छ। तापनि चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि बुद्धिको उपयोगले अग्रता दिलाउन सक्छ।
२०७८ कार्तिक ७ गते, आइतवार, (२४ अक्टोबर २०२१)
तपाईको आज शनिवारको राशिफल भन्छ- आज यी पाँच राशिकाले दिनुपर्नेछ विशेष ध्यान !